RIP: Frank Batten Sr - Ilay miliardera tsy henonao mihitsy | Martech Zone
RIP: Frank Batten Sr - Ilay miliardera tsy henonao mihitsy
Talata, Septambra 15, 2009 Alarobia, Febroary 10, 2016 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny olona dia mbola tsy naheno momba an'i Frank Batten Sr ivelan'ny Hampton Roads, Virginia. Raha vao nandao ny tafika an-dranomasina amerikana aho ary nandeha niasa tao amin'ny The Virginian-Pilot, dia tsy nisy zavatra henoko afa-tsy zavatra lehibe avy tamin'ny Pressmen izay niasa tamin'ny gazety rehefa niresaka izy ireo Frank Sr. Fantatra fa nivoaka tany amin'ny milina fanaovan-gazety izy ary niresaka izany tamin'ny mpiasa rehetra - ny ankamaroany dia fantany tamin'ny anarany mandra-pahatonga ny orinasany ho lehibe loatra.
Nandritra ny taona maro, ny mpiasan'ny Landmark dia naka ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ary nahazo bonus 2 herinandro tamin'ny Krismasy. Rehefa nihasarotra ny fotoana na niforitra ny departemanta dia tsy noroahinay izahay - nisotro ronono an-tsitrapo ny mpiasa na nafindra toerana hafa tao amin'ny orinasa. Io dia momba ireo mpiasa niaraka tamin'i Frank hatrany.
Rehefa nandray fitantanana kalitao tanteraka ny Landmark Communication, ny fandraisana karama voafantina kendrena ary ny programa fanatsarana mitohy, ny mpitantana rehetra dia nandalo ny fiofanana rehetra tadiavin'izy ireo. Tamin'ny faha-XNUMX taonako dia nanatrika fiofanana momba ny fitarihana mpitarika mihitsy aho ary nihaona mivantana tamin'i Frank. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nahazo traikefa tamin'ny fitarihana sy fitantanana bebe kokoa aho noho ny ankamaroan'ny olona manana ny asany manontolo. Nino i Frank fa ny mpiasa tsara kokoa dia nianatra sy notsaboina, arakaraka ny fahombiazan'ny orinasa. Nandaitra izany.
Tamin'izany fotoana izany dia nianatra ny tenany hiteny tamin'ny alàlan'ny filentehana i Frank taorian'ny fahaverezan'ny feony noho ny homamiadan'ny vozona. Maheno tsara ny feony ianao. Nanontany ny olona iray hoe: “Ohatrinona, Frank?” ary ny valinteniny dia tsy momba ny vola izany - fa ny fiarovana ny ho avin'ny orinasa ary ny fieritreretana ireo fianakaviana rehetra izay misy tampon-trano.
Ny tantara nahafinaritra indrindra notantarain'i Frank dia ny fanombohana The Weather Channel. Raha milamina ihany, dia nandany vola ny orinasa ary nilaza i Frank fa ara-bakiteny ny slip-mavokely an'ny olon-drehetra ao am-potony. Nanararaotra ihany anefa izy ary nifampiraharaha ny vidin'ny isan-tokantrano amin'ireo orinasa tariby izay nanova ny indostria iray manontolo! Izy io dia nandefa iray amin'ireo fantsona nahomby indrindra tamin'ny fahitalavitra tariby. Raha tsy niady tamin'ny homamiadan'ny tenda izy, dia mety nanana ny Landmark News Network fa tsy CNN an'i Ted Turner.
Tsy fantatry ny olona ny momba an'i Frank Batten satria mpanao asa soa izy ary nanetry tena. Tadidiko ny fotoana naneren'ny orinasa an'i Frank hamerina ny biraony sy hanala ilay sofa sy latabatra nokapohiny nandritra ny taona maro. Tompondaka marina tamin'ny orinasa izy, tamin'ny fiarahamonina ary hatramin'ny zanak'olombelona. Nandritra ny fisarahan-toerana dia nametraka ny fiainany ho tandindomin-doza izy ary nanohy niteny ho an'ny fidirana satria no zavatra tsara tokony hatao.
Andro mampalahelo ho ahy ity ary ny fiaraha-miory dia ho an'ny fianakaviany, indrindra fa i Frank Batten Jr. Faly aho fa nifanena tamin'i Frank Batten, rainy. Nanetry tena izy, niasa mafy, nankasitraka, nandray tsara ireo mpiasany, ary mbola afaka nampivelatra ny orinasany tamim-pitandremana ihany. Tsy mbola nisy nandrefy ny olona ary tsy azoko antoka hoe hisy hahavita!
Hamaky bebe kokoa momba ny fiainana mahafinaritra an'i Frank Batten izay nosoratan'i Earl Swift tao amin'ny The Virginian-Pilot. Frank Batten Sr no miliardera mety tsy mbola henonao akory - fa mety hianatra zavatra betsaka amin'ny fiainana niainany ianao.
Sary avy amin'ny The Virginian-Pilot
Tags: miliarideramivantana batten srserasera manan-tantarasoa nataon'nyasa soavirjiny-polotfantson'ny toetr'andro
Manamboara fifamoivoizana amin'ny bilaogy miaraka amin'ny eCourse sy adiresy faharoa
Sep 16, 2009 ao amin'ny 2: PM PM
Doug, fanomezam-boninahitra mahafinaritra ho an'ny olona iray izay mazava ho azy fa nanampy tamin'ny famolavolana anao. Tokony ho tsara vintana tokoa isika rehetra ka hanana "Frank" hijerena ny asantsika!